बर्दियाको जंगलमा शौचालयमा थुनेको भन्दै स्ट्याटस लेखेका हरिस अवस्थीले नै ….. – Nep Stok
पुष २८, २०७८ बुधबार 174
बैतडीको सूर्नया गाउँपालिका-६ मा एक जनाको श’व गा’डे’को अवस्थामा भेटिएको छ । सूर्नया-६ को धुलिधार जंगलमा ओडारभित्र श’व गा’डे’को अवस्थामा फेला परेको हो ।
गत हप्ता मात्रै आफूलाई अ’प’ह’रण ग’रे’को भनी फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका हरिस अवस्थीले आफूले नै मान्छे मा’रे’र गा’डे’का बताएपछि प्रहरीको टोली उनले भनेकै ठाउँमा पुगेको थियो । अवस्थीले भने अनुसार प्रहरीले खा’ड’ल ख’ने’प’छि स’डे’को अवस्थामा शव भेटाएको हो ।
शव स्थानीय ३२ वर्षका डम्बर अवस्थीको रहेको बुझिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता तथा प्रहरी निरीक्षक बोधराज ओझाले भने,‘केही दिन अघि हराएको भनिएका व्यक्तिलाई प्रहरीले बर्दियाबाट उद्धार गरेको थियो । तर, उसले आफैले मान्छे मा’रे’र भा’गे’को भनेपछि हामीले ओ’डा’रभित्र ख’ने’पछि शव भेटाएका हौं । यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ साँझ ६ बजे शव निकालिएपछि पो’स्ट’मा’र्ट’मका लागि जिल्ला अस्पताल ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
आफूले ह’त्या ग’रे’को स्वीकार गरेका अवस्थीले गत हप्ता आफ्नो फेसबुकमा केही मान्छेले आफूलाई मा’र्न बर्दियाको जंगलमा शौचालयमा थुनेको भन्दै स्ट्याटस लेखेका थिए । उनले गाउँकै मान्छेहरूले आफूलाई मा’र्न खो’जे’काले बचाउन आग्रह गरेका थिए ।
Prev२४ घण्टामा ह्वात्तै बढ्यो कोरोना संक्रमण, काठमाडौं मा मात्रै देखियो यति धेरै संक्रमित, आईसीयू र भेन्टिलेटरमा कति?
तीनबर्ष अगाडी पोर्तुगल जाने भन्दै हिडेको छोरा नफर्केपछि…. (भिडियो सहित)